Artiisiti Umar Sulemaan: ''Ani qabsaa'aa Uummataati malee kan paartii siyaasaa miti'' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Feesbuukii Umar Suleymaan
Ummanni Oromoo tokkummaan motummaa taankiifi xiyyaara qabu dura dhaabbachuun sadarkaa ammaa kanarra kan gahe, ammas tokkummaan dhaabbachuun murteessaadha jedha, jenaraal Aartiisti Umar Sulemaan.
Jenaraal Artiistii Umar Sulemaan wallisaa beekamaan Oromoo A L I gaafa Muddee 27 gara biyyaa deebbii'a.
Artiistii beekamaan kun, dhalatee kan guddate Godina Baalee, ganda Abubakar Zallootti. Erga sababii siyaasaatiin biyyaa bahee boodas waggoota dheeraaf biyya Noorway keessa jiraataa tureera.
Attamiin hojii aartii akka eegaleefi karoora isaa gara fuula duraa ilaalchisuun BBC dubbiseeniira.
Ummata mirga isaatiif falmatu irraa dhalachuun isaanuma keessatti barataa guddachuun kiyyaa akkan bilisummaa ummata Oromotiif kan qooda kiyyaa gummaachuuf na kakaaseera jedha wallisaan beekamaan kun.
''Ani aartii kanan eegalee akkuma aadaa haawaas keenyaatti, ummaticha bakka cidhaa fi qophii adda addaarratti akkuma sirbuu sana, anis akkasuma sirbuu fi xabachuun keessatti guddadhe'' jechuun akkaataa itti hojii aartii kana eegale yoo himu.
Ummanni Oromoo bara dheeraaf motummaa gabroonfataa waliin qabsaa'aa kan tureedha kan jedhu artiisti Umar, ''Anis bara sana keessa uummata qabsoo keessatti dhaladhee qabsoodhuma keessatti gudadheera'' jedha.
Kanaafuu, qabsoon, dhimma ani yeroon booda itti makame osoo hintaane kan haadhaafi abbaa akkasumas ummata naannoo isaa irraa dhaale ta'us himeera.
Kanarraa ka'unis waamicha qaama kamiiyyuu osoo hin eeggatiin dandeettii aartiitti fayyadamuun waan irraa eegamu gumaachuuf yaalaa akka ture hima.
Gumaachi kunis gama geerarsaa, walaloo fi sirboota aadaatiin akka ummanni oromoo abdii hin kutanne dadammaqsuu fi hamilee itti horuu fa'a ture,akka Umar jedhutti.
Wayita aanga'oonni ABO biyyatti galaniitti artisitoonni isaan waliin turan hedduunis gara biyyaa deebii'anii turan.
Ati maaliif biraa hafte jechuun gaaffii dhiyaateef deebii yoo kennu: ''Ani bari qabsaa'aa dhaabaa mitii. Ani artistii ummataa fi qabsaa'aa ummataatii. Ani nama dhiheenya kana qabsoo eegalees miti,'' jedheera.
Itt dabaluunis, ''Egeree illee aartii dhaabaa miti kan hojjennu. Dhaabbanni keenya bara 1981 akka ummataatti sochii aartii Oromiyaafi Oromummaatti dabalamne malee ani qabsoo gaafa sana hin eegalle,'' jedha Janaraal Artiisti Umar.
Motummaan darbuu ykn kufuu danda'a, aartiin garuu baroota qaxxaamuuree kan jiraatuudha kan jedhu artiistii beekamaan kun, ammas aartii keenyaa itti fufuun ummata keenyaaf qabsaa'uu qabna jedheera.
Dhumarrattis, ''tokkummaan murteessaadha. Sadarkaa amma irratti argamnu kanas kan geenyee waan tokkoomneef. Tokkummaadhaan motummaa taankii fi xiyyaara qabu fuuldura dhaabachuun jijjiramni kun kan dhufe.''
''Haa ta'u malee tokkummaan ummata keessa jiru kun dhaabbilee siyaasaa keessa hingalle. Kanaafuu dhaabbileen tokko ta'uu fi afaan tokko dubbachuun jijjirama amma argame kana itti fufsiisuun ummata fuuldura deemuu qabu,'' jechuun dhaameera.
Aartiidhaan qabsoo Oromoo keessatti humnaa fi hamilee umuusaatiin gahee olaanaa bahachuusaatiin badhaasa janaraalummaa argateera.
Viidiyoo Ogummaa fakkii halluu baala, hidda, biyyee fi kannen birootti fayyadamuun kaafamu